Bahoxe isigubhukane abameli bakamsholozi - Ilanga News
Home Izindaba Bahoxe isigubhukane abameli bakamsholozi
Bahoxe isigubhukane abameli bakamsholozi
NguMnu Jacob zuma
KUSOLWA izizathu ezahlukene ngokuhoxa kwabameli bakaMnu Jacob Zuma ecaleni lakhe lenko-hlakalo okumele liqale mhla ka-17 kuNhlaba (May) 2021, izingqapheli zezomthetho ezibona ukuthi kuzo-msiza akwazi ukusebenzisa ama-qhinga okubambezela ukuqulwa kwalo.
Ummeli kaMnu Zuma, uMnu Eric Mabuza, ufake isaziso soku-hoxa ekumeleni ikilayenti lakhe, nokho wangabeka zizathu.
UMnu Sipho Ngwema okhulumela iNational Prosecuting Authority (NPA), ukuqinisekisile ukuthi bayi-tholile incwadi evela kwabakwaMa-buza Attorney’s ibazisa ngokuhosha kwabo imfe ekumeleni uMnu Zuma.
“Singakusho kugcwale umlomo ukuthi umbuso uvivile, ukulungele ukuqhubeka naleli cala mhla ka-17 kuNhlaba 2021,” kusho uMnu Ngwema.
Yize kunjalo, izazi zomthetho no-mthethosisekelo zithi lokhu kuhoxa kwabameli kuzoba nomthelela ongemuhle kuleli cala.
UDkt Lawson Naidoo onguno-bhala weCouncil for the Advance-ment of the Constitution, uthe nge-nxa yesinqumo seNkantolo eNkulu yokuDluliswa kwamaCala sokuvala ompompi boMbuso abebegeleza inkece yokukhokhela izindleko za-macala kaMnu Zuma, akuthusi ukuthi abameli bakhe baqome ukuho-xa.
“Kungenzeka nokuthi ubhekwe ngelakubo uMnu Zuma njengoba le nto yenzeke manje, ngoba ingamnika ithuba lokufuna ukuba kuba-mbezeleke ukuqulwa kwecala. Uzo-funa ukuba inkantolo ikuqonde ukuthi udinga ukwengezelwa isikhathi (sokulungiselela icala),” kusho uDkt Naidoo.
Ummeli wasemajajini, u-Adv Paul Jorgensen uthe isizathu esi-ngaba sobala ngesokuthi uMnu Zuma akanayo imali eyanele uku-bhekana nezindleko zecala.
“Esesibili, kungaba wukungaboni ngasolinye phakathi kwabameli ba-khe mayelana nokuthi kumele li-phathwe kanjani leli cala. Okukhulu kakhulu okusolisayo, kungaba wukuthi yinto ehleliwe, okuyosiza uMnu Zuma ekubambezeleni icala,” kusho u-Adv Jorgensen.
Mayelana nenkampani yezikhali yaseFrance, iThales, emangalelwe noMnu Zuma kuleli cala, u-Adv Jorgensen uthe ingase ifake isicelo sokuba lisuswe ohlwini lwamacala kunokuthi lihlehliswe ngesikhathi uMnu Zuma esathungatha abameli abasha, ngenxa yokuthi ukubambe-zeleka kwalo akudalwanga yiyona.
Kwenzeka lokhu nje, ngeledlule iNkantolo eNkulu yokuDluliswa kwamaCala yagqema uMnu Zuma udume, ichitha isicelo sakhe sokuba iguqule isinqumo seNkantolo eNkulu yasePretoria esasithi uMbuso akufanele ukhokhele izi-ndleko zamacala akhe, ngakho ku-mele abuyise imali yabakhokhi be-ntela engaphezu kuka-R25 million obesekukhokhelwe ngayo abameli.
Inkampani yakwaMabuza ihoxa nje, yathatha lo msebenzi ngoMbasa (April) nyakenye kade uphethwe yiMichael Hulley and Associates.
Previous articleUnesi ecaleni lokudlwengula isiguli
Next articleZIYAWUSHAYA KUBABES NOMPINTSHO